लक्ष्मी पूजाको दिन भुलेर पनि नगर्नुस् यी १८ काम, लक्ष्मी ढोकाबाटै फर्किन्छिन् ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/लक्ष्मी पूजाको दिन भुलेर पनि नगर्नुस् यी १८ काम, लक्ष्मी ढोकाबाटै फर्किन्छिन् !
नगर्नुस् यस्ता काम:’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
७. देवी लक्ष्मीको पूजा गर्दा भगवान विष्णु साथमा नराखी उपासना गर्नुहुँदैन । यसलाई अपूरो मानिन्छ ।८. लक्ष्मीपूजाको दिन पूजा कोठा सफा र हरेक सामग्री मिलाएर राखिएको हुनुपर्छ ।९. लक्ष्मीपूजाको रातभरि अनिवार्य दियो बालेर राख्नुपर्दछ ।
१०. घरका सबै सदस्यले उत्तरतर्फ मुख फर्काएर उत्तरपूर्व दिशामा पूजा गर्नुपर्छ ।११. पूजा गर्दा मात्र घिउमा दियो बाल्नुहोस्, दियो ११, २१ वा ५१ को संख्यामा हुनुपर्दछ ।१२. आराधना गर्ने गणेशको मूर्तिको बसेको हुनुहुँदैन साथै सुँड दायाँतर्फ फर्केको हुनु हुँदैन ।१३. लक्ष्मीपूजा गर्दा सकेसम्म रातो रंग भएका वस्तुको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्थात दियो, मैनबत्ति, फूल लगायतका वस्तु रातो हुनुपर्छ ।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **